အလိုအလျောက်စတစ်ကာပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက် - Micvd.com
အခြားထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစပ်။ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်များလိုအပ်သည်။ NPACKသင်၏ထိပ်တန်းပုလင်းပုလင်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်ကိရိယာသည်သင်၏စက်ရုံအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ စိတ်ကြိုက်ပုလင်းတံဆိပ်စက်များနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများမှသင်အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သည် NPACK.
ကနေပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်ကိုသုံးပြီး NPACK သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီပုလင်းများတွင်စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အခြားစာသားနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအသုံးချနိုင်ခြင်းဖြင့်အရည်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ရန်သင့်စက်ရုံအားသင်၏စက်ရုံအားပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်ယန္တရားများသည်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီးပုံစံ၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောပုလင်းများတွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ စက္ကူသို့မဟုတ် Mylar တံဆိပ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပုလင်းတံဆိပ်တစ်ခုစီသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သင်သည်ဤပစ္စည်းကိရိယာများကိုသင်၏ကျန်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းနှင့်လုံး ၀ ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုသီးခြားပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်းများကိုအမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများတွင်သုံးနိုင်သည်၊ အသေးများ၊ ပါးလွှာသည့်ပုလင်းများမှ၊ ကျယ်ပြီးကျယ်သည့်ကွန်တိန်နာများအထိလိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်များသို့တံဆိပ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ငါတို့သည်လည်းအန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ပုလင်းတံဆိပ်စက်မော်ဒယ်များသယ်ဆောင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သည့်အချိန်တွင်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုသည်၊ ဤပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်များကိုကြာရှည်ခံပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောစက်ရုံများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်ထုပ်ပိုးခြင်းစနစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ cappers နှင့် conveyor များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ထားသောတံဆိပ်ကပ်စက်များအားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုလင်းများအတွက်ရှာဖွေပြီးသင်၏စက်ရုံအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာမှန်ကိုရှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်များအကြောင်းအခမဲ့အချက်အလက်များနှင့်အတူသင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းပြီးစီးရန်ပုလင်းများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်များအပြင်အခြားသယ်ဆောင်သည့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်းသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။
သင်၏ပုလင်းတံဆိပ်စက် ၀ ယ်ယူမှုမှအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းနိုင်သည့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လိုင်းပြုပြင်ခြင်းစသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ပုလင်း Oriented တံဆိပ်ကပ်စက်
ရှန်ဟိုင်း NPACK Shanghai ရှိစတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်အလိုအလျောက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း။ ပုလင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်တံဆိပ်တပ်ခြင်းစက်သည်ပုလင်းလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီးလက်နှိပ်စက်၏ပြslနာကိုလျှော့ချနိုင်သည်
သုံးစွဲသူသည်လက်စွဲကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအမြန်နှုန်းသည်လည်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းကို Pharma၊ ဓာတုဗေဒ၊ အစားအစာလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်
automatic Npack Automatic Equipment Co. , LTD သည်မည်သည့်တံဆိပ်တပ်စက်အမျိုးအစားတွင်မဆိုကျွမ်းကျင်သည်။ (စတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်၊ ကော်တံတံမြိုင်စက်၊ Sleeving တံဆိပ်ကပ်စက်) ။ ပုလင်းရည်ညွှန်းထားသော sitcker တံဆိပ်ကပ်စက်သည်စတစ်ကာတံဆိပ် / Adheisve တံဆိပ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးပတ်ပတ်လည်ပုလင်း၊ တင်းဘူး၊ အိုးများအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ စတစ်ကာများကပ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်ပုလင်းရည်ညွှန်းတံဆိပ်စက်၊
ပုလင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိစေသောတံဆိပ်ကပ်စက်ကို servo မော်တာဖြင့်ထိန်းချုပ်သည် (အမှတ်အသားအတိအကျမှာ ၁ မီလီမီတာ) ။ မည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်မဆိုသင့်လျော်သည်။
တံဆိပ်ကပ်စက်၏လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုထိုင်ဝမ် (သို့) ဂျပန်တွင်ပြုလုပ်သည်
အချက် ၃ ချက်ပါသောယန္တရားသည်ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းတိကျမှုကိုခွင့်ပြုသည်
စွယ်စုံပုလင်းအချင်းများအတွက် pneumatic ခြုံ - ပတ်ပတ်လည်ဘူတာရုံ
အမည် ပုလင်း Oriented တံဆိပ်ကပ်စက်
တံဆိပ်ကပ်မြန်နှုန်း 20-40pcs / မိနစ် (တံဆိပ်အရှည်နှင့်ပုလင်းအထူပေါ် မူတည်. )
အချင်းအတွင်းပိုင်း label ကြိတ်စက် 76mm
တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှု 0.5mm ±
Power ကထောက်ပံ့ရေး 220V 50 / 60HZ 0.8KW
ပရင်တာ၏ဓာတ်ငွေ့စားသုံးမှု5ကီလိုဂရမ် / စင်တီမီတာ ^ 2
တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်၏ Size ကို 2000 (W) × 1000 (H) မီလီမီတာ× 1250 (L)
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့် PLC ထိန်းချုပ်မှု
ပြောင်းလဲမှုပုလင်းအရွယ်အစားအတွက်လွယ်ကူသောတံဆိပ်ကပ်ခြင်း parameters တွေကိုများအတွက်မှတ်ဉာဏ်ချက်ပြုတ်နည်းများ 30 ခန့်။
အနိမ့်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေတံဆိပ် detect ။
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်သော Servo motor drive
တံဆိပ်ပေါ်တွင် EXP MFG BATCH ကို print ထုတ်နိုင်သောပူသောသတ္တုပါး coding စက်ကိုပြုပြင်သည်
Ampoule & ဖလားကိုစတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်
Ampoule / ဖလားကိုစတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်ကိုရှန်ဟိုင်းမှထုတ်လုပ်သည် NPACK Equipment Automatic Co.ltd ။ အဓိကအားဖြင့်ဆေးပုလင်း၊ အမ်ပိုဆံ၊ ခံတွင်းအရည်၊ သွေးပြွန်၊
အလိုအလျောက်ခံတွင်းအရည်ပုလင်းများအလျားလိုက်တံဆိပ်ကပ်စက်၊ အပိုလို / ကော် / အမ်အတွက်အလိုအလျောက်ကော်တံဆိပ်စက်။
ဤစက်သည် servo မော်တာဖြင့်ပုံဖော်ထားပြီးခေါင်းခေါင်း၏ထိပ်တွင်ပူသောသတ္တုပါး coding စက်ကိုတပ်ဆင်သည်။
1. 304 သံမဏိဘောင်ဆောက်လုပ်ရေး
3. အလိုအလျောက် feed ကို turntable အချင်း 550mm
4. ပူသတ္တုပါး coding စက်
(၅) Servo motor နှင့် PLC နှင့် Touch Screen တို့သည် prefect label ကိုသေချာပေါက်သေချာစေသည်
အမည် Ampoule / ဖလားကိုတံဆိပ်တပ်ခြင်းစက်
မောင်း Servo မော်တော်ယာဉ်မောင်း
တံဆိပ်ကပ်မြန်နှုန်း 100-180PCS / Min
Label အတိအကျ 1mm
တံဆိပ် Core အချင်း 76mm
အတိုင်းအတာ 1800mm * 800mm * 1600mm
စွမ်းအား 220V လူပျိုအဆင့် 750W
2. မလုံလောက်တံဆိပ်များ, ကျိုးတံဆိပ်များသတိပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည်
၃။ ပုလင်းမရှိ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမရှိပါ
၄။ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်သတိပေးခြင်းမရှိပါ
5. အဘယ်သူမျှမဖဲကြိုး, အလိုအလျောက်သတိပေးချက်
6. ပုလင်းဗန်းပေါ်တွင်ရပ်လျက်, တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဘို့အပေါ်ကိုအပေါ်အလိုအလျောက်အိပ်လေ၏
7. Servo မော်တာထိန်းချုပ်တံဆိပ်မရှိတံဆိပ်ချိုး, မြန်နှုန်းမြင့်။
NPACK စတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ အလိုအလျောက်စတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်သည်ပုလင်းတစ်လုံးအတွက်ဖြစ်ပြီးလက်နှိပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏ပြslနာကိုလျှော့ချပေးသည်။
ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းဆိတ်တာတံဆိပ်ကပ်စက်သည်စတစ်ကာတံဆိပ် / Adheisve တံဆိပ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ ပတ်ပတ်လည်ပုလင်း၊ ဗူး၊ ဗူးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီစက်သည်စတစ်ကာအညွှန်းကိုစက်ဝိုင်းကွန်တိန်နာပေါ်တွင်အလိုအလျောက်ထုပ်ပေးသည်။
သုံးစွဲသူသည်လက်စွဲကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအမြန်နှုန်းသည်လည်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းကို Pharma၊ ဓာတုဗေဒ၊ အစားအစာလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
1 တံဆိပ်ကပ်စက်တစ်လုံးပတ်လည်တွင်အလိုအလျောက်ပတ်ထားခြင်းကို servo မော်တာဖြင့်ထိန်းချုပ်သည် (အမှတ်အသားအတိအကျမှာ ၁ မီလီမီတာ) ။ မည်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်မဆိုသင့်လျော်သည်။
၂ သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောပုလင်းကိုပြောင်းလဲသောအခါမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ဖောက်သည်သည်အလွယ်တကူညှိရန်လွယ်ကူပြီးတံဆိပ်ကပ်စက်ဖြစ်သည်။ စက်2နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
3 တံဆိပ်ကပ်စက်၏လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုထိုင်ဝမ် (သို့) ဂျပန်တွင်ပြုလုပ်သည်
ပုံစံ NP-RL ပုလင်းဘူးတံဆိပ်ကပ်စက်
အရှိန် 40-150 PCS / Min
Labeling အတိအကျ 1.0mm ±
တံဆိပ်အရွယ်အစား (L) 20-280mm (H) 30-140mm
ပစ္စည်းအရွယ်အစား Φ40-Φ100mm (H) 40-300mm
စက်အရွယ်အစား (L) 1800 * (W) 850 * (H) 1450 (မီလီမီတာ)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ AC220V 50Hz / 60Hz 1500W
1. ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့် PLC ထိန်းချုပ်မှု
2. ပုလင်းအရွယ်အစားပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအတွက်မှတ်ဥာဏ်ချက် ၃၀ ခန့်။
3. အနိမ့်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးတံဆိပ် detect ။
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်သောကြောင့် Servo motor drive
7. တံဆိပ်ပေါ်တွင် EXP MFG BATCH ကို print ထုတ်နိုင်သောပူသောသတ္တုပါး coding စက်ကိုပြုပြင်သည်
အိတ်ကပ်စတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်ကိုထုတ်လုပ်သည် NPACK။ ကစတစ်ကာတံဆိပ်အားဖြင့်အိတ်, အိတ်, ပုံး, ကဒ်တံဆိပ်ကပ်သည်
အဆိုပါတံဆိပ်သည်စတစ်ကာများ၊ Surface တံဆိပ်ကပ်စက်။ အိတ်အလိုအလျောက်ခွဲထုတ်။
အိတ်ကပ်တံဆိပ်ကပ်စက်သည် doypack popuch၊ အိတ်၊ အိတ်၊ ကဒ်တံဆိပ်စက်အတွက်သင့်တော်သည်။ ဒီစက်ကအိတ်တစ်လုံးနဲ့အိတ်တစ်လုံးကိုအလိုအလျောက်ခွဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်။
၂ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို Japan သို့မဟုတ် Europe တွင်ပြုလုပ်သည်
3 အိတ်မပါဘဲ, တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမရှိဘဲ
4 စတစ်ကာ / ကပ်လျက်တံဆိပ်အတွက်သင့်တော်သည်
အိတ်၊ ကဒ်၊ အိတ်ဘူးနှင့်မျက်နှာပြင်သေတ္တာအမျိုးအစားပေါ်တံဆိပ်ကပ်ပါ
အမည် Bag စတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်
တံဆိပ်ကပ်မြန်နှုန်း 20-200pcs / မိနစ်
တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှု 0.8mm ±
Power ကထောက်ပံ့ရေး 220V 50 / 60HZ 0.75KW
ပရင်တာ၏ဓာတ်ငွေ့စားသုံးမှု 5Kg / စင်တီမီတာ ^2(coding စက် add လျှင်)
တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်၏ Size ကို 1600 (W) × 550 (H) မီလီမီတာ× 1600 (L)
1 PLC နှင့် Touch ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
စက်၏အဓိကကိုယ်ထည်မှာ 2SS ဖြစ်သည်
3 ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်သောတံဆိပ်ကိုသေချာစေရန် servo မော်တာနှင့်အာရုံခံကိရိယာ (ဂျပန်တွင်ပြုလုပ်သည်) ကိုအသုံးပြုသည်
4 နေ့စွဲအချက်အလက်များကိုတံဆိပ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ရန် coding စက်ကိုပြုပြင်သည်
5 အဘယ်သူမျှမအရာဝတ္ထု, အဘယ်သူမျှမတံဆိပ်ကပ်ခြင်း
အပေါ်ဘက်တွင်စတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်စက်ကိုထုတ်လုပ်သည် NPACK။ ထိပ်ပုံးများ၊ သံဖြူသံဗူးများ၊ အိတ်များနှင့်လေယာဉ်မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးကိုတံဆိပ်ကပ်နိုင်သည်။
Top Side Sticker တံဆိပ်ကပ်စက်သည်သေတ္တာများ၊ ပုလင်းများ၊ ဘူးများစသည့်လေယာဉ်မျက်နှာပြင်ရှိအရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်။ အလှကုန်၊ အချိုရည်၊ ဓာတု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အစားအစာလုပ်ငန်း၊ စာရေးကိရိယာ CD၊ စက်အစီအစဉ်မျက်နှာပြင်တံဆိပ်ကပ်။
၅ သေတ္တာ၊ အိတ်၊ သေတ္တာနှင့်မျက်နှာပြင်သေတ္တာအမျိုးအစားပေါ်တံဆိပ်ကပ်ပါ
အလိုအလျှောက်နှစ်ဖက်ဘက် Sticker တံဆိပ်ကပ်စက်
Automatic Two Sides Sticker တံဆိပ်ကပ်စက်ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် NPACK။ ၄ င်းသည်စတုရန်း၊ ပြား / ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းနှစ်ဖက်တပ်သည့်စက် (ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်) ဖြစ်သည်။
ဤစက်သည်ပုလင်းများကိုသီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သည်၊ မော်တော်ကားတစ်စီးသည်စာနယ်ဇင်းပုလင်းစက်နှင့်သယ်ဆောင်သူနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Servo motor, PLC နှင့် touch screen သည်မြင့်မားသောတံဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Automatic Two Sides Sticker တံဆိပ်ကပ်စက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အဝိုင်းပုလင်း၊ ပြားချပ်ပြား၊ စတုရန်းပုလင်းတို့အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဖောက်သည်အချို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှစ်ဖက်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းတံဆိပ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ ၎င်းသည်ဆေးဝါး၊ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်း၊ အစားအစာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤစက်သည် servo motor နှင့် PLC နှင့် touch screen ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည်စတစ်ကာများ / ကော်တံဆိပ်ကပ်စက်ဖြစ်သည်။
1 Servo မော်တာ, PLC နှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
၂ ပုလင်းတစ်လုံးချင်းစီခွဲ။ ပုလင်းပေါ်ရှိပုလင်းကိုနှိပ်ပါ
၃ တချိန်တည်းတွင် (ရှေ့နှင့်နောက်) စတစ်ကာတံဆိပ်နှစ်ခုကပ်ပါ
4 ချိတ်ဆက်ခြင်းပုံစံနှင့် capping စက်
အမည် အလိုအလျှောက်နှစ်ဖက်ဘက် Sticker တံဆိပ်ကပ်စက်
တံဆိပ်ကပ်မြန်နှုန်း 60-350pcs / မိနစ် (တံဆိပ်အရှည်နှင့်ပုလင်းအထူပေါ် မူတည်. )
တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှု 1mm ±
Power ကထောက်ပံ့ရေး 220V 50 / 60HZ 3.5KW Single-phase
တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်၏ Size ကို 2800 (W) × 1650 (H) မီလီမီတာ× 1500 (L)
1. PLC နှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်, servo မော်တာ
6. Servo မော်တာထိန်းချုပ်မှု, တည်ငြိမ်တံဆိပ်ကပ်။
8 ပတ် ၀ န်းကျင် / ပြား၊ စတုရန်းပုလင်းနှင့်သင့်တော်သည်
NPACK Self-adhesive တံဆိပ်ကပ်စက်၊ နှစ်ဖက်ဘေးတံဆိပ်ကပ်စက်၊ ပူ / အအေးကော်တံဆိပ်စက်၊ အလိုအလျောက်လက်တံစက်တပ်ဆင်ခြင်း။
နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်စတုရန်းပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်သည်ပုလင်းနှင့်ပုံပေါ်ရှိစတစ်ကာတံဆိပ်နှစ်ခုကို PLC နှင့် touch screen တို့ဖြင့်ကပ်နိုင်သည်
NP-TS နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်တံဆိပ်ကပ်စက်ကိုဖောက်သည်အချို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှစ်ဖက်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုနှစ်ဖက်တံဆိပ်ကပ်စက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဆေးဝါး၊ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်း၊ အစားအစာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအတွက်စတုရန်း၊ ပြားချပ်ချပ်ပုလင်းများ၊
Double-sidel တံဆိပ်ကပ်စက်သည် Multi, Function တံဆိပ်ကပ်စက်ဖြစ်ပြီး Flat, Oval, Square, Round ပုလင်းများအတွက်ဝတ်စုံဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောတံဆိပ်အတိအကျကိုသေချာစေရန်ဤစက်ကို servo motor drive မှထိန်းချုပ်သည်။
3 Servo မော်တာနှင့် PLC သည်တံဆိပ်အတိအကျကိုသေချာစေနိုင်သည်
၁။ PLC နှင့် Touch Screen CONTROL၊ တံဆိပ်များ၏အရှည်ကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးပါ
တံဆိပ်များမပါဘဲ 4. အလိုအလျှောက်သတိပေးချက်
7. ပြီးပြည့်စုံသော Label ကိုအတိအကျ
၈။ ပုလင်း၊ ဘူး၊ ဘူးအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်
ဖောက်သည် (၉) ယောက်သည်လေဘယ်ထောင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်